Nsogbu Ballast na Ankara Sivas YHT Line! Wepụ 60 Kilometer Rail | RayHaber | raillynews
HomeTurkeyCentral Anatolia Region06 AnkaraNsogbu Ballast na Ankara Sivas YHT Line! Wepụrụ 60 Kilometer Rail
21 / 01 / 2020 06 Ankara, 58 Sivas, Central Anatolia Region, ụgbọ okporo ígwè, General, Oru ngwa ngwa, Isi akụkọ, Turkey
ankara sivas yht akara balast nsogbu nsogbu ụgbọ ala wepụrụ
Na ụzọ ụgbọ elu gbara ọsọ dị kilomita iri anọ na anọ ga-ejikọ Ankara na Sivas, e wepụrụ ụzọ ụgbọ okporoko nke ngalaba 406-kilomita n'ihi nsogbu ahụ dapụtara. Ekpebisiri ike na ballast, nke edobere n’ahịrị ma na-eme atụmatụ ibuli ibu nke ga-eme n’oge njem, agbajiela, na -eme ma na-eme mkpọtụ, gosipụtara akara nká mgbe a gbasara anyanwụ. E kpebiri iji dochie ballast ahụ, nke tụgharịrị enweghị ike ịnọ ruo afọ 60.
HaberturkDika akuko Olcay Aydilek si; “N'ịdọ aka na ntị TCDD, ụlọ ọrụ nkwekọrịta buliri ụgbọ elu ahụ na ngalaba 60-kilomita. Ọ malitere dochie ballast. Ekwuputala na usoro a ka emechara. Isi mmalite kwuru na onye ọrụ ngo kpuchiri ọnụ ahịa ahụ (ihe ruru nde 10 TL).
N'etiti nnukwu aga n'ihu akụrụngwa oru ngo na Turkey nso na njedebe nke Sivas-Ankara High Speed ​​Train akara. Puku kwuru puku mmadụ na-arụ ọrụ oge karịrị akarị nke isi n'okporo ụzọ kilomita 406 iji nyere ọrụ ahụ aka iru ọkara nke afọ a.
Ozugbo arụchara ọrụ ahụ, oge njem n'etiti Sivas na Ankara na YHT ga-agbadata ruo awa abụọ. Ọ ga-ewe awa 2 n'etiti Istanbul na Sivas.
Ọ bụ ezie na ọrụ a na-aga n’ihu n’ike n’ike, a kpebisiri ike na nsogbu na “ballast” ahụ etinyere n’akụkụ ahịrị ahụ. Ndị otu nyocha nke TCDD chọpụtara na enwere nsogbu ọrụaka nke “ịka nká” na ballast na mpaghara 60 kilomita n'ogo ọrụ ha.
Yabụ, gịnị bụ ballast na gịnị bụ nsogbu ahụ? A na - akpọ okwute ndị a n'okpuru okporo ụzọ dị iche iche ma na - eme atụmatụ ibuli ibu nke ga - eme n'oge njem ana - akpọ "ballast". Ballast nwere ndụ akụ na ụba nke afọ 5. Ọ tụgharịrị na ballast tọgbọrọ ebe a na-egosi ihe ịrịba ama nke "ịka nká" mgbe ịkpọtụrụ anyanwụ. Ekpebisiri ike na ya agaghị eburu ibu ahụ nakwa na n'oge na-adịghị anya ọ ga-agbasa.
Nlekọta TCDD dọrọ ndị ọrụ ngo aka na-arụ ọrụ ahụ. Ewepula okporo ụzọ nke kilogram 60. Usoro ndozi Ballast malitere. Ekwuputala na usoro a ka emechara. Isi mmalite kwuru na onye ọrụ ahụ kwụrụ ọnụahịa (ekwuru na ọ bụ nde TL 10).
Map nke Ankara Sivas Train Speed ​​Speed
Na-ekwupụta ọkwa: Ballast compression okporo ígwè isii ballast na-arụ ọrụ igwe ga-zụrụ
A na-anakọta ego maka ịchọta okporo ígwè na-emepụta ballast compression n'okpuru igwe na-ekpuchi ballast
TCDD ballast compression tra-sub-ballast iwepụta igwe ngwa ngwa pụta
Onyinye Mileage 2015 na 100 na Alanya, 35 Mileage Hot Asphalt Target
Nkwupụta Obi Ụtọ: A ga-eji ígwè nyocha ihu igwe kwadoro ballast
Ankara Sivas YHT Line mbụ Rail Laying Ememe Bụ Nwere
Enweghị nsogbu nchekwa na TCDD Ankara-Istanbul YHT akara
Ankara Sivas YHT Line Rail Laying Work Ac Aclelerated
Ankara Sivas High Speed ​​Railway Line Rail Welding Work
Taa na akụkọ ihe mere eme: 25 March 2018 Ankara-Sivas YHT Line First Rail Paving
Oge Prozụta Ihe: Ankara-Eskişehir High Speed ​​Line KM: 460 + 800 - 461 + 700 steel…
Arslan, Ankara-Sivas YHT na ọkara nke abụọ nke 2018 Ankara-Istanbul…
Mara Ọmịiko: A ga-edozigharị ma rụkwaa ọrụ ndozi (igwe nyocha bat, Buraj…
Ankara Sivas High Speed ​​Line akara ụbọchị
Ankara Sivas High Speed ​​Train ụgbọ
Nsogbu Ballast na Ankara Sivas YHT Line